(Redirected from Intanethi)
I-intanethi uhlelo oluqukethwe amkhompyutha ayizigidi ahlangene ndawonye kuhleloxhumano olunzulu kuwo wonke amagumbi omhlaba olusebenzisa i-Internet protocol suite (TCP/IP). Uma uxhumeke kuyo in-intanethi nomshini osuke uwusebenzisa okungaba yikhompyutha noma umakhalekhukhwini nawo ingena kulo lolu xhaxha lohleloxhumano. Lolu hleloxhumano lohleloxhumano luqukethe olungasese, olomphakathi, olwamabhizinisi kanye nolwahulumeni uhleloxhumano olusezweni noma emhlabeni oluhuxhumene nngobuchwepheshe obuno-gesi, ubengenazo izintambo kanye nobama-fibre optics. I-inthanethi iqukethe ulwazi olnuningi okubalwa amakhasi amakhulu-ahlangene kanye namahlelokusebenza esisizindalwazi sokuxhumana somhlaba jikelele (WWW), umbikombani, ucingo lokuxhumana, kanaye nokwabelana ngamafayela.
Ukubaluleka kwe-intanethi[hlela | Hlela umthombo]
Okubalulekile nge-intanethi ukuthi iyakwazi ukuthatha umhlaba wonke iwusondeze, iwubeke esibukweni sekhompiyutha noma umakhalekhukhwini. Nge-intanethi abantu bayakwazi ukuxhumana nebhange, izitolo, imitapo yolwazi, izihlobo nabangani, ngingabala ngithini. Uthuthuka kobuchwepheshe be-intanethi sekuholele ekutheni kwenziwe iomali esebenza khona kwi-intanethi kuphela ukuthenga konke okudingayo. Lemali esebanza kwi intanethi kuphela ibizwa ngokuthi ama-crypto currencies, edume kakulu yaziwa ngokuthi yi-Bitcoin eyasungulwa ngonyaka wezi-2009 ngumlisa ozibiza ngoSatoshi Nakamoto.
Umthumeli we-intanethi ngokuka Buky Schwartz, endaweini yaseHolon, ezweni lakwaIsrayeli
Retrieved from "https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=I-Intanethi&oldid=45557"
This page was last edited on 7 uMbasa 2018, at 19:53.